by မြေကြီးတပြင် Talk ကို
အခုတော့များစွာကိုကျောင်းများကော်ဖီဆိုင်ကျောင်းမှာနေ့လည်စာ၏အာဟာရအရည်အသွေးကိုတိုးတက်အောင်အများအပြားမိဘများနှင့်ကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၏အစီအစဉ်အပေါ်ဖြစ်ပါသည်, သူတို့ရဲ့ကျောင်းသားတွေကိုဆိုဒါတွေနှင့်အခြားကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အရောင်းစက်ပစ္စည်းများကိုရောင်းချရပ်တန့်ပါပြီ။ နှင့်ကံကောင်းတာပတ်ဝန်းကျင်ကိုအဘို့, ကျန်းမာသန်စွမ်းအစားအစာများသောအားဖြင့်စိမ်းလန်းတဲ့အစားအစာကိုဆိုလိုသည်။
အချို့ကရှေ့ကို-စဉ်းစားတွေးခေါ်ကျောင်းများအနေဖြင့်၎င်းတို့၏ကော်ဖီဆိုင်အစားအစာ sourcing အားဖြင့်တာဝန်ခံကိုဦးဆောင်လျက်ရှိသည် ဒေသခံလယ်ယာမြေနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ ။
ဒါကပိုက်ဆံချွေတာခြင်းနှင့်လည်းအစားအစာတာရှည်အကွာအဝေးပို့ဆောင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ညစ်ညမ်းမှုများနှင့်ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုသက်ရောက်မှုအပေါ်ပြန်လျှော့ချနိုင်သည်။ အများအပြားသည်ဒေသခံထုတ်လုပ်သူများအော်ဂဲနစ်ကြီးထွားလာနည်းလမ်းများမှလှည့်နေကြသည်ကတည်းကများနှင့်ဒေသခံအစားအစာများသောအားဖြင့်ကလေးတွေ '' ကျောင်းကနေ့လည်စာအတွက်နည်းပါးလာပိုးသတ်ဆေးကိုဆိုလိုသည်။
အဝလွန်ခြင်းနှင့်ညံ့ဖျင်းသောအစာအာဟာရမှလင့်ခ်လုပ်ထားသော School တွင်နေ့လယ်စာ
ငယ်စဉ်ကလေးဘဝအဝလွန်စာရင်းဇယားများနှင့်ကျောင်းများတွင်ကျောင်းသားကျောင်းသူများကမ်းလှမ်းကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အစားအစာများ၏ပျံ့နှံ့ခြင်းဖြင့်အုတ်အုတ်သဲသဲ, 2000 ခုနှစ်အစားအစာနှင့်တရားမျှတမှုများအတွက်စင်တာ (CFJ) ကျောင်းနေ့လည်စာအစီအစဉ်ကိုအမျိုးသားလယ်ယာအကွက်ချလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုလည်းဒေသခံလယ်သမားများကထောက်ပံ့စဉ်ကျန်းမာကော်ဖီဆိုင်အစားအစာများကိုဒေသခံလယ်ယာနှင့်အတူကျောင်းများချိတ်ဆက်။ မသာကျောင်းများပါဝင်ဒေသအလိုက်စားနပ်ရိက္ခာရရှိရန်, သူတို့အစာအာဟာရ-based သင်ရိုးညွှန်းတမ်းထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ဒေသခံခြံမှလာရောက်လည်ပတ်သူမှတဆင့်သင်ယူမှုအခွင့်အလမ်းနှင့်အတူကျောင်းသားကျောင်းသူများသည်။
ကျောင်းအစီအစဉ်များမှလယ်ယာယခုအသက် 19 ပြည်နယ်များနှင့်ရာပေါင်းများစွာသောကျောင်းကခရိုင် operate ။
CFJ မကြာသေးမီကပိုပြီးပြည်နယ်နှင့်ခရိုင်ဖို့အစီအစဉ်ကိုတိုးချဲ့ဖို့ wk Kellogg ဖောင်ဒေးရှင်းမှထံမှသိသိသာသာပံ့ပိုးကူညီမှုကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အုပ်စုရဲ့ website က (အောက်တွင် link ကို) ကျောင်းများစတင်ရေးသားရန်အတွက်အရင်းအမြစ်များကိုတင်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။
ကြံ့ဖွံ့က 32 States မှာကျောင်းနေ့လည်စာအစီအစဉ်ကမ်းလှမ်း
အမေရိကန်စိုက်ပျိုးရေးဌာန (USDA) ကိုလည်း 32 ပြည်နယ်များအတွက် 400 ကျောင်းကခရိုင်ပါဝင်မှုဂုဏ်ယူတဲ့အသေးစားလယ်တွေ / ကျောင်းအစားအစာ program ကို run ပေးနိုင်ပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားကျောင်းများအေဂျင်စီရဲ့ထွက်စစျဆေးနိုငျ "အတူတကွအသေးစားလယ်တွေနှင့်ဒေသခံကျောင်းများကိုယူခဲ့ဖို့ဘယ်လိုအဆင့်-by-အဆင့်လမ်းညွှန်ချက်" ရရှိနိုင်အခမဲ့အွန်လိုင်းတည်းဟူသော။
စားဖိုမှူးအဲလစ်ရေကျောင်းနေ့လည်စာဟင်းချက် Classes ရဲ့သွန်သင်
အခြားကျောင်းများမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာကျဆင်းယူကြပြီ။ ဘာကလေ, ကယ်လီဖိုးနီးယား, စားဖိုမှူးအဲလစ်ရေကျောင်းသားများကို၎င်းတို့၏ရွယ်တူ '' ကျောင်းကနေ့လယ်စာ menus တွေဒေသခံအော်ဂဲနစ်အသီးအနှံနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကြီးထွားခြင်းနှင့်ကိုပွငျဆငျသောချက်ပြုတ်အတန်းရရှိထားသူမှတ်ချက်ချသည်။ ရုပ်ရှင်ထဲတွင်မှတ်တမ်းတင်အဖြစ်နှင့် "စူပါ Size ကိုငါ့ကို" Wisconsin ပြည်နယ်ရဲ့ Appleton မှာနေတဲ့အကြောင်းဗဟိုအခြားရွေးချယ်စရာကျောင်းအများစုတပြင်လုံးကိုအစေ့, လတ်ဆတ်သောအသီးအနှံနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်မှအသားများနှင့် junk အစားအစာအပေါ်မိုးသည်းထန်စွာပြုသောပူဇော်သက္ကာထဲကနေ Appleton မှာနေတဲ့အကြောင်းရဲ့ကော်ဖီဆိုင်ခအသွင်ပြောင်းကူညီပေးခဲ့ကွောငျးဒေသခံတစ်ဦးအော်ဂဲနစ်ကိတ်မုန့်ငှါး၏။
ဟုတ်ပါတယ်, မိဘများသူတို့ကလေးတွေကိုလုံးဝကော်ဖီဆိုင်ဟာယပူဇော်သက္ကာ forgoing ကျန်းမာအိတ်နေ့လည်စာအတူကျောင်းကိုသူတို့ရဲ့ကလေးတွေကိုပေးပို့ခြင်းအားဖြင့်ကျောင်းတွင်ကောင်းစွာစားသောသေချာနိုင်ပါတယ်။ နေ့စဉ်နေ့လယ်စာချမှတ်ခြင်း regimen အတူတက်ထားရန်နိုင်ခြင်း on-the-go မိဘများအတွက်, ဆန်းသစ်ကုမ္ပဏီများသည်သင်တို့အဘို့ထိုသို့ပြုလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပေါက်မှစတင်နေကြသည်။ San Francisco မှာ Kid Chow, ကျန်းမာရေး Fairfax, ဗာဂျီးနီးယားက e-နေ့လည်စာကလေးများ, နယူးယောက်မြို့ရဲ့ KidFresh နှင့်မန်ဟက်တန်သဲသောင်ပြင်ကယ်လီဖိုးနီးယားရဲ့ဘရောင်း Bag Nature တစ်ကော်ဖီဆိုင်နေ့လယ်စာ၏အကြောင်းကိုသုံးကြိမ်စျေးနှုန်းအဘို့သင့်လေးတွေမှအော်ဂဲနစ်နှင့်သဘာဝအစားအစာနေ့လည်စာကယ်နှုတ်တော်မူပါလိမ့်မယ်။
အကောင်းဆုံး Is ဘယ်ဟာ: တောရိုင်းမုန် vs မုန်မွေးမြူရေး?
Fracking, Hydrofracking သို့မဟုတ် Hydraulic အရိုးကျိုးဆိုတာဘာလဲ
ဆဲလ်ဖုန်းမည်သို့ကို Safe ရှိပါသလဲ
အစ္စလာမ်ဘာသာအတွက်လက်ခံစသည်တို့ Fertilization ခုနှစ်တွင်လား?
အစ္စလာမ်ဘာသာအတွက် Allowed ဆေးလိပ်သလဲ?
အဆိုတော်ရှင်ပေါလုပန်းချီဆရာများဖြစ်တဲ့ Gauguin ရဲ့ဘဝတစ်သက်ကရာဇျစဉျ Timeline ကို
101 ငုံ့ string
15 အကောင်းဆုံးအဟောငျးကျောင်းက Hip-Hop နဲ့လေ့ကျင့်ခန်းသီချင်းများ
Demand ကို၏ cross-စျေး elasticity
အီတလီကြိယာ conjugation: Chiedere
တစ်ဦးနဲ့ Big က Canvas ပေါ်မှာပန်းချီ
ရေခဲပြင်အခမဲ့စင်္ - အမေရိကသို့ခလိုဗစ်၏ Pathway
တစ်ဦး Boson ဆိုတာဘာလဲ
တစ်ဦးက Broken ရေ Pump အစားထိုးမည်
Ensembles: အတူတကွလှပသောဂီတ Making